Eto ianao no ho voalohany hanandrana ny lamina Youtube vaovao! | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | Famolavolana tranonkala, lohahevitra
Ho avy amin'ny 2017 ny YouTube vaovao! Ary io ilay sehatra manaitra indrindra an'ny Google goavambe nofidiana ho an'ny endrika vaovao avy amin'ireo mpamolavola azy. Mba hahatratrarana an'ity fanovana ity dia fanovana kely efa an-taonany maro no lasa amin'ny resaka sary sy mpilalao, ary koa ny boaty fanehoan-kevitra sy ireo fiasa vaovao hafa nipoitra.
Ny sehatra video izay mamorona fijery miliara isan'andro ary izay ampahatelon'ny mponina izay mitazona ny Internet ao an-tranony no voasoratra anarana, dia nila nohavaozina izy ireo. Avy amin'ny Google na YouTube dia lazain'izy ireo fa endrika madio kokoa sy tsy mikorontana izy io, ka "mora kokoa ny mamakivaky azy" ary manome toerana bebe kokoa an'ireo fantsona hita ao. Satria eny, satria mendrika azy ireo izy ireo.
Zavatra tsy mila hazavaina izany, Tsy hisy dikany ny YouTube, raha tsy misy fantsona an'arivony na an-tapitrisany miasa isan'andro izay manohana ny sehatra amin'ny alàlan'ny dokam-barotra. Izany no antony nahatonga azy ireo hieritreritra fa mendrika ny fifanatonana. Raha te-hahita azy manokana dia mila manaraka ity manaraka ity fotsiny ianao rohy ary mahavoa «Mandehana any amin'ny YouTube».
1 Fanadihadiana ny fiovana amin'ny endrika
2 Mode ... Maizina!
Fanadihadiana ny fiovana amin'ny endrika
lafika: Betsaka ny fiovana amin'ity famolavolana YouTube vaovao ity. Iray amin'izy ireo ary manaitra tokoa raha vao miditra ianao, dia loko. Talohan'ny nitahirizany volondavenona tany aoriana (R: 241 G: 241 B: 241) mba hanavahana azy amin'ireo sakana nisy azy Nanapa-kevitra ny hanafoana azy ireo izy ireo ary hamela loko tokana ary noho izany endrika fisaka amin'ny tranonkala. Miaraka amin'ny fahatsapana minimalism sy fahadiovana.
habe: Amin'ny ampahany 100% amin'ny endriny roa dia toa manana toerana ambony kokoa ireo miniature. Talohan'izay dia ho kely kokoa noho ny ankehitriny izy ireo ary toa vao mainka nampiharihary. Zavatra iray izay misy famahana kely dia mety tsy dia manintona loatra, raha atambatra. Izy io koa dia manova ny haben'ny horonantsary mibodo tanteraka ny efijery, eny, tsy ilay horonantsary.
tontonana: Talohan'ny fisehoan'ny tontonana ankavanana dia mandeha ho azy izy raha mbola nijanona toy izany ianao tamin'ny session farany nataonao, dia miseho foana izany. Ary tsy maintsy hisy izany satria nisy singa telo nipoitra teo ambony teo aloha: «Trano». "Fironana". "Famandrihana". Izao dia tsy miseho afa-tsy eo amin'ny valan'ny mpampiasa eo ankavia izy.
Tsy maintsy lazaiko ihany koa fa eo am-panovana azy io, angamba hiseho ny fiasa sasany any aoriana
mpampiasa: Araka ny nolazaiko teo aloha, raha ny filazan'izy ireo dia manan-danja kokoa amin'ny endriny vaovao ireo mpampiasa ankehitriny. Saingy, tsy hitako izany. Seho iray antenaiko fa ampian'izy ireo fa efa fanaon'izy ireo taloha ny mametraka ny totozy a youtuber ary jereo ny topy mason'ny fantsonao. Toy ny mombamomba anao sy ny mombamomba anao, ny mpamandrika ary ny fampahalalana fanampinyo.
Boaty fampahalalana fanampiny: Misy fiovana tena manaitra eto, ary raha fariparinao tsara hoe iza no nanao ilay horonantsary (raha ny momba ireo sary mihetsika), iza no namokatra na nandray anjara tamin'izany dia tsy hiseho ho tsotra nosoratan'i ny mpanoratra. Ankehitriny dia ho toa matihanina kokoa sy voalamina tsara. Zavatra nilaiko izany ary toa tena marina.
Mode ... Maizina!
Mihoatra ny fanovana ny endriny hanakaikezana ny fotoana vaovao, maody maizina dia singa misaraka tanteraka. Nisy zavatra nirin'ny maro. Indraindray, ao anaty toe-javatra isika, fa ny loko fotsy dia mety hanelingelina olona hafa na ianao. Izany no antony nilaina ny maody maizina.
Ho an'izay tsy mahita an'io dia manome ohatra iray aho: Alaivo an-tsaina hoe mandeha lamasinina na bus ianao amin'ny alina ary maro ny olona matory. Raha manana maody maizina ianao, ny jiro taratry ny solosainao finday dia tsy hitifitra amin'ny mainty toy ny itondranao azy fotsy. Ireo karazana toe-javatra misy azy io dia ilaina. Ary maro no azo antoka fa hankasitraka izany.
Mba hanovana azy amin'ny maody maizina, mandehana any amin'ny tontonana mpampiasa vaovao izay nomanin'ny YouTube ho anao. Raha mbola tsy afaka nanova mpampiasa fotsiny ianao ary afaka mivoaka, dia afaka manao bebe kokoa ianao izao. Toy ny maody maizina, fiteny na fidirana voafetra, ankoatry ny hafa. Ho hitanao ao ilay safidy 'Dark Mode: Tsia' ary ovao ho eny. Tadidio fa raha manova ny solosainao ianao na ny mpitety anao aza dia tsy maintsy ampodinao indray ny maody maizina.
Misy antony ampy tokony hialana amin'ny YouTube dieny izao ary esory ny zorony rehetra amin'ny sehatra hahitanao vaovao, Inona no andrasanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Eto ianao no ho voalohany hanandrana ny layout Youtube vaovao!
Fa maninona no ankahalaina be ny typografika Comic Sans?